सचिवालय बैठक अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत–अरु के भयो ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more सचिवालय बैठक अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत–अरु के भयो ?
सचिवालय बैठक अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत–अरु के भयो ?	अध्यक्षद्वयका लिखित पत्र बाडियो सचिवालयमा
कात्तिक २८ गते, २०७७ - १८:०९
बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीको संकटबारे राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदन सबै सदस्यलाई दिइएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक सकिएको छ । बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीको संकटबारे राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदन सबै सदस्यलाई दिइएको छ । तर, सो प्रतिवेदनमा के छ भन्ने विषय भने खुलाइएको छैन ।
बैठक बोलाउन सहमति दिन माग गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पेश गरेको पत्र, त्यसको जवाफमा ओलीले प्रचण्डलाई लेखेको पत्र र त्यसको प्रतिउत्तरमा प्रचण्डले ओलीलाई लेखेको पत्र समेत नेताहरुलाई दिइएको छ ।
नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार गएको भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकपछि जारी गरिएको आन्तरिक पार्टी निर्देशन पनि सबै सदस्यहरुलाई अध्ययनका लागि वितरण गरिएको छ । शुक्रबारको बैठकले आगामी बैठकका कार्य सूची तय गरेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार वर्तमान अवस्थामा देखिएको पार्टी संकटबारेको छलफल बैठकको मुख्य कार्यसूची हुनेछ ।
बैठकमा भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन, सङंगठनको सुदृढीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सरकार सञ्चालन, कर्णाली विवाद, पर्सा हत्याकाण्ड, रअ प्रमुखसँ ओलीको भेटलगायत कोभिड–१९ को विषयमा बैठकमा छलफल हुने कार्यसूची छ ।
कात्तिक २८ गते, २०७७ - १८:०९ मा प्रकाशित